Khamiis, Janaayo 14, 2021 Khamiis, Janaayo 14, 2021 Douglas Karr
Haddii aad tahay shirkad shirkadeed meesha aad ugu qaybisay xogta nidaamyo kala duwan, Qalabka Macluumaadka Macaamiisha (CDP) waa ku dhowaad baahi loo qabo. Nidaamyada waxaa badiyaa loo qaabeeyey hanaan hawleed gudaha ah ama otomatig ah… awood uma laha inay ku eegaan waxqabadka ama xogta safarka macaamiisha oo dhan. Kahor inta aysan Platform-yada Xogta Macmiilku ku dhicin suuqa, kheyraadka lagama maarmaanka u ah is-dhexgalka dhufto ee kale waxay xannibeen hal rikoor oo run ah oo qofkasta oo ururka ka tirsan uu ku arki karo waxqabadka agagaarka
Hantida ugu qaalisan ee ganacsigu waa wadahadalkeeda - labadaba wadahadalka gudaha ee shaqaalaha dhexdiisa iyo wadahadalada dakhliga dibadda ee abuuraya macaamiisha. Symbl waa qayb dhammaystiran oo ah API-yada falanqeeya wada-hadalka aadanaha ee dabiiciga ah. Waxay siinaysaa horumariyayaashu awood ay ku weyneeyaan is-dhexgalyadan kuna dhisaan khibrado macmiil aan caadi ahayn kanaal kasta - ha noqoto cod, muuqaal ama qoraal. Symbl waxaa lagu dhisay teknolojiyadda Wadahadalka Cilmiga ah (C2I), taasoo u saamaxaysa kuwa horumariya inay si dhakhso leh u dhexgalaan sirdoonka farsamada casriga ah ee socda